အတတ်ပညာ China Custom HDPE Electrofusion Fittings , 110mm Electrofusion HDPE 45 Degree Elbow ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |CHUANGRONG
စိတ်ကြိုက် HDPE Electrofusion Fittings ၊ 110mm Electrofusion HDPE 45 Degree Elbow
1. အမည်- EF 45 ဒီဂရီ တံတောင်ဆစ်
2. အရွယ်အစား: dn25-630mm
3. PE100 Water PN16 သို့မဟုတ် Gas 10 Bar
4. ISO4427 ၊ ISO4437 / EN12201၊ EN1555
PN16 SDR11 PE100 ရေပေးဝေမှုအတွက် ၁၁၀ မီလီမီတာ ၄၅ ဒီဂရီ တံတောင်လျှပ်စစ် HDPE ကိရိယာများ
PE100 အပျိုစင် ကုန်ကြမ်း
EN 12201-3:2011၊EN 1555-3:2010
ဓာတ်ငွေ့၊ ရေ၊ ဆီ စသည်တို့
PN16 SDR11 PE100 ရေပေးဝေမှုအတွက် ၁၁၀ မီလီမီတာ ၄၅ ဒီဂရီ တံတောင်ဆစ်လျှပ်စစ် HDPE ကိရိယာများ
Electrofusion HDPE 45Degree Elbow ၏ထုတ်လုပ်မှု ရှင်းလင်းချက်
HDPE ပိုက်များကို အတူတကွ ချိတ်ဆက်ရန်အတွက် Electrofusion HDPE fittings များကို electrofusion စက်ဖြင့် ဂဟေဆော်သည်- electrofusion welding စက်ကို လျှပ်စစ်မီးတပ်ပြီး ဖွင့်ပြီးနောက်၊ လျှပ်စစ် fuse HDPE ပစ္စည်းများတွင် ထည့်သွင်းမြှုပ်ထားသော ကြေးနီဝိုင်ယာများကို အပူပေးပြီး HDPE အရည်ပျော်သွားစေရန်၊ မည်သည့် HDPE ပိုက်နှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ကောင်းမွန်စွာ တွဲဖက်ထားသည်၊ .
မှန်ကန်သော ဂဟေဆက်ခြင်းဘောင်များကို အသုံးပြုကြောင်း သေချာစေရန် ပင်မှ လုံးဝ အလိုအလျောက် မက်ထရိုကို ထောက်ပံ့ပေးသည်။ပင်နံပါတ်တစ်ခုစီတွင် resiter တစ်ခုရှိသည်။hte electrofusion box ကို fitting နှင့် ချိတ်ဆက်သောအခါ၊ pin သည် အဆစ်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်သော မှန်ကန်သော fusion time ကို အလိုအလျောက်သိရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။အော်ပရေတာအားလုံးလုပ်ရမှာက go ကိုနှိပ်ပါ။
အီလက်ထရွန်းနစ်လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း တပ်ဆင်မှုအတွင်း အဆစ်အတွင်းရှိ တိုးချဲ့သွန်းသောပလပ်စတစ်ဖြင့် ဖန်တီးထားသော ဖိအားသည် ညွှန်ပြချက်lugs များကို တွန်းထုတ်မည်ဖြစ်သည်။ဤသည်မှာ လိုအပ်သော ပူးတွဲဖိအားကို အောင်မြင်ကြောင်း မြင်သာသော လက္ခဏာဖြစ်သည်။
ပုံသွင်း-in ဂဟေ parameters တွေကို
Manual welding parameters များသည် fittings အားလုံးကို ကိုယ်ထည်ထဲသို့ ပုံသွင်းပါသည်။ပေးထားသောအချက်အလက်များတွင် အံဝင်ခွင်ကျအရွယ်အစား၊ materail(PE80 သို့မဟုတ် PE110)၊ သက်ဆိုင်သောပိုက် SDR များ၊ ဂဟေဆက်ခြင်းဘောင်များနှင့် ဓာတ်ငွေ့နှင့်ရေအသုံးချမှုများအတွက် ဖိအားအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ ပါဝင်သည်။
အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသည် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ အောင်မြင်မှု၏ဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။ဘားကုဒ်သည် ပိုလီမာအသုတ်အထိ အပြည့်အဝ ခြေရာခံနိုင်မှုကို ပေးဆောင်သည်၊ အံဝင်ခွင်ကျတစ်ခုစီအတွက် ထုတ်လုပ်သည့် ကုန်ကြမ်းဖြစ်သည်။ဘားကုဒ်သည် ဘားကုဒ်စကင်နာတစ်ခုပါရှိသော electrofusion သေတ္တာများနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဂဟေဆက်ခြင်းဆိုင်ရာဘောင်များကိုပါ သယ်ဆောင်ပေးပါသည်။ဆက်စပ်ပစ္စည်းအားလုံးရှိ QR ကုဒ်အသစ်သည် စားသုံးသူထံရောက်ရှိသည့် အံဝင်ခွင်ကျတစ်ခုစီတွင် ခြေရာခံနိုင်မှုကို အပြည့်အဝပြသထားသည်။
50×45° ၁၃၀ 50 ၄.၇
63×45° ၁၈၀ 63 ၄.၇
90×45° ၂၃၀ 83 ၄.၇
110×45° ၂၇၀ 90 ၄.၇
160×45° ၂၈၀ 85 ၄.၇
200×45° ၃၃၀ ၁၀၀ ၄.၇
250×45° ၄၂၀ ၁၁၅ ၄.၇
315×45° ၄၇၀ ၁၃၀ ၄.၇
400×45° ၅၈၀ ၁၄၀ ၄.၇
စမ်းသပ်ပစ္စည်းများ ရလဒ် နိဂုံး
ပုံပန်းသဏ္ဍာန် တပ်ဆင်ပစ္စည်းများ၏အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ဘက်မျက်နှာပြင်များသည် သန့်ရှင်း၊ ချောမွေ့နေသင့်ပြီး လေဝင်ပေါက်များ၊ ကျုံ့သွားသော တွင်းများ၊ နံရံများပေါ်လွင်သော ခြစ်ရာများ နှင့် အခြားသော မျက်နှာပြင် ချို့ယွင်းချက်များ ရှိနေသင့်ပါသည်။ ပိုက်များ အဆင်သင့်မဖြစ်ဘဲ ပြည့်စုံသင့်သည် ။ ခြေစစ်ပွဲ
အံဝင်ပေါက် ပေါက် သို့မဟုတ် အီလက်ထရို ပေါင်းစပ်မှု ပေါက်ပေါက် ပျမ်းမျှ OD MM / ခြေစစ်ပွဲ
နံရံအထူ MM / ခြေစစ်ပွဲ
ROUNDNESS MM အပြင် / ခြေစစ်ပွဲ
TUBULAR LENGTH MM / ခြေစစ်ပွဲ
အီလက်ထရွန်းနစ် အံဝင်ခွင်ကျ ခေါင်းလောင်း အဆုံး ပျမ်းမျှ ID MM 160 ကျော် ခြေစစ်ပွဲ
FUSION ဧရိယာ LENGTH MM 20 ကျော် ခြေစစ်ပွဲ
အိတ်၏အနက် MM ၆၈-၉၈ ခြေစစ်ပွဲ
ROUNDNESS MM အပြင် 2.4 အောက် ခြေစစ်ပွဲ
Electronic FUSION FITTING ၏ လျှပ်စစ်စွမ်းဆောင်ရည် 23 ℃
MAX-အမည်ခံ x (1+10%)+0.1Ω
MIN- အမည်ခံ x (1-10%) ခြေစစ်ပွဲ
ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဂုဏ်သတ္တိများ Oxidation Induction Time (200 ℃) မိနစ် 20 ကျော် ခြေစစ်ပွဲ
ရေအားလျှပ်စစ်စွမ်းအား 80 ℃/၊Stress အသံမြည်ခြင်း။5.4Mpa၊
ပျက်စီးချိန် ≥ 165 နာရီ၊ မကွဲ၊ ယိုစိမ့်ခြင်းမရှိ
စစ်ဆေးရေး နိဂုံး SAMPLEING PIPE FITTING သည် China Standard GB/T 15558.2-2005 ၏ လိုအပ်ချက်အရ စစ်ဆေးစစ်ဆေးခံရသော ပိုက် “အပိုင်း 2” ၏ “အပိုင်း 2” ပိုက်၏ BURIED POLYETHYLENE (PE) pipeline SYSTEM ၏ THE PIPRESUITS” WISTAR PIPS”
(GB/T 15558.2-2005 “အပိုင်း 2” သည် EN1555-3:2010 အတိုင်းဖြစ်သည်)
၁။မြူနီစီပယ်ရေပေးဝေရေး၊ ဓာတ်ငွေ့ပေးဝေရေးနှင့် စိုက်ပျိုးရေး စသည်တို့။
2.Commercial & Residential ရေပေးဝေခြင်း။
5. အစားအသောက်နှင့် ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်း
6. ဘိလပ်မြေပိုက်များနှင့် သံမဏိပိုက်များ အစားထိုးခြင်း။
7. Argillaceous နုန်း၊ ရွှံ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ၉။ဥယျာဉ်စိမ်းပိုက်ကွန်ရက်
ကျွန်ုပ်တို့သည် ISO9001-2008၊ BV၊ SGS၊ CE စသည်တို့ကို ထောက်ခံချက်ပေးနိုင်သည်။ကုန်ပစ္စည်းအမျိုးအစားအားလုံးကို ဖိအား-တင်းကျပ်စွာ ပေါက်ကွဲစမ်းသပ်မှု၊ ရှည်လျားကျုံ့မှုနှုန်းစမ်းသပ်မှု၊ အမြန်ဖိစီးမှုအက်ကွဲခံနိုင်ရည်စမ်းသပ်မှု၊ ဆန့်နိုင်အားစမ်းသပ်မှုနှင့် အရည်ပျော်မှုအညွှန်းကိန်းစမ်းသပ်မှုတို့ကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ထုတ်ကုန်များ၏ အရည်အသွေးသည် ကုန်ကြမ်းမှကုန်ချောအထိ စံချိန်စံညွှန်းများ အပြည့်အဝရောက်ရှိကြောင်း သေချာစေပါသည်။ .
ယခင်- စက်မှုအရည်များသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် HDPE Socket Fusion Fittings အမျိုးသမီး Tee PE100 PN16 SDR11
နောက်တစ်ခု: HAVC နှင့် Chilled Water အတွက် အပြာရောင် ဖိအားမြင့် PPR ပိုက်အပြည့်အစုံ
Electrofusion Fittings ထုတ်လုပ်သူ
Electrofusion Fittings စျေးနှုန်းများ
Electrofusion Hdpe Fittings
Electrofusion ပိုက် Fittings
Hdpe ပိုက် Electrofusion
PN16 SDR11 PE100 HDPE Electrofusion Fittings Fl...
Electrofusion HDPE Pipe Fittings PE/Steel Tra...
ထိုးသွင်းပုံသွင်းခြင်း HDPE Electrofusion Fittings P...
90-315mm HDPE Electrofusion Fittings ပြုပြင်ခြင်း ဝမ်းနည်းစရာ...
CR HDPE Electrofusion Fittings ၊ Electrofusion ...